Mudaharaadayaasha Suudaan: Waxaan degdeg ku dooneynaa dowlad rayid ah - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka AFP/HO/SUDAN TV
Image caption Sareeya Gaas Abdel Fattah Abdelrahman Burhan
Hoggaamiyeyaasha mudaharaadyada ka socda magaalada Khartoum ayaa mudaharaadayaasha ka codsaday iney laba maalmood ku sii sugnaadaan waddooyinka waaweyn ee Khartoum.
Tillaabbada cusub ee ay mudaharaadayaashu ku dhawaaqeen ayaa imaneysa laba maalmood kaddib marki ay ciidamada Suudaan ay xilka kala wareegeen Madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir.
Waxayna mudaharaadayaashu dalbanayaan in si degdeg dowlad rayad ah oo ku meel gaar ah loo dhiso oo ay ciidamada xilka wareejiyaan.
Image caption Mudaharaadayaasha ayaa maanta isugu soo baxay waddooyinka magaalada Khartoum
Madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir waa laga tuuray xilka, laakiin dadkii ku mudaharaadayay xukunkiisa wali ma qanacsana wayna sii wadaan mudaharaadyadooda.
Waxaana sida oo kale xilka isacasilay madaxa sirdoonka dalkaasi Generaal Salax Goosh.
Image caption Sareeya guud Saalax Goosh
Iscasilaadda Generaal saalaxna waxay timid saacada un kaddib marki uu sargaalka ciidamada xilka Suudaan la wareegay hoggaaminayey oo ahaa wasiirka gaashaan dhigga Cawad Ibnu Cawf uu xilka iska casilay. Isaga oo aan sheegin sababta uu iisu casilay.
Shabakadda wararka ee gaarka loo leeyahay ee 365 ayaa maanta shaacisay iney Axadda barri ah ay hoggaamiyeyaasha mucaaradka la kulmayaan saraakiisha ciidamada ee isbeddelka hormuudka u ah.
Waxayna sheegeen iney kala hadli doonaan sidi dalka looga soo dabbaali lahaa isbeddel la taaban karo oo ay ka mid tahay in la dhiso dowlada rayid ah oo ku meel gaar ah.
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Sudan Congress Omar el-Digeir, wuxuu sheegay "iney ciidamadu noqon kuwa awoodda dalka isku dhajiya"
Ururka ay leeyihiin aqoonyahannada Suudaan SPA oo mudaharaadyada qayb weyn ka ahaa ayaa ku baaqay iney ciidamada ka shaqeeyaan sidi ay dalka uga hirgeli lahayd dowlad rayad ah oo ku meel gaar ah.
Afhayeen u hadashay Midowga Afrika oo lagu magacaabo Ebba Kalondo waxay sheegtay "in la joogo xilligi ay dhinacyada Suudaan isku haya ay wadahadallo yeelan lahayeen".
Lahaanshaha sawirka Courtesy Lana H Haroun
Image caption Aalaa Saalax oo ah gabadh hoggaamiso mudaharadyada
Maxay mudaharaadayaashu ka walwalsan yihiin?
Image caption Sarreeye gaas Abdle Fattah Abdelrahman Burhan oo Jimcihi la hadlay mudaharaadayaasha Khartoum
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay António Guterres ayaa codsaday "in lasoo celiyo xasiloonida iyo kala dambeynta", wuxuuna ku baaqay in xukunka loo wareejiyo "sida dimuqraadiyadda ku dheehan tahay" ee ay shacabku rabaan.
Haddaba Al-BAshiir maxaa ku dhici kara?
Madaxweynihi hore ee Suudaan Cumar Xasan Al-bashiir ee xilka laga qaaday waxay maxkamadda dambiyada dagaalka caalamiga ah ay ku soo oogtay dacwad ku saabsan inuu gabood fallo xuquuqda aadanaha uu ka geystay gobolka Daarfuur ee dalka Suudaan.
Balse golaha ciidamada ee xilka la wareegay ayaa sheegay ineysan dhiibeyn Mr Bashiir, oo dalka Suudaan ay k uhaynayaan.
Image caption Sarreeya Guud Ibnu Cawf
Mr Ibn Cawf oo ahaa madaxa sirdoonka ciidamada Suudaan ahaa xilliga uu dagaalki Daarfuur socday wuxuu Mareykanka uu 2017-dii uu ku soo rogay cunaqabateyn.
Image caption Qariiradda Suudaan